Filtrer les éléments par date : lundi, 03 juin 2019
lundi, 03 juin 2019 21:00
Mercredi 05 juin 2019: Id AL-FITR, férié, chômé et payé
lundi, 03 juin 2019 16:33
Maroantsetra: Mitohy ny fitakiana fahadiovan'ny fifidianana
Tsy nitsahatra ny hetsika fitakiana aty Maroantsetra, taorian'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 27 mey lasa teo. Tsy manaiky ny hosoka misy aty an-toerana ireo vahoaka marobe.
Nisy moa mpitandro ny filaminana nalefa manokana aty an-toerana izay nanentanan'ny Praiminisitra ny rehetra anao ny fitoriana eny anivon'ny sampandraharaha mikasika ny fifidianana, fa hatreto tsy nampiato ny fitakian'ireto vahoaka marobe ireto izany.
lundi, 03 juin 2019 15:46
Faty telo hita tao Antanifotsy: Tamin’ny alakamisy no andro farany nahitan'ny havany azy ireo velona
Mivoatra ny raharaha mikasika ireo lehilahy telo hita faty tao amin’ny reniranon’i Onive, ao Ampitatafika, Distrika Antanifotsy, Faritra Vakinankaratra ny marainan’ny zoma 31 mey 2019.
Fantatra fa avy any amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa, Faritra Matsiatra Ambony izy ireo, ary Kaominina samihafa no fiaviany ary olona tsy mifankafantatra ihany koa izy ireo.
Tsy mandry fahalemana iny Distrikan’Ambohimahasoa iny, misy hetsika fampandriantany miady amin’ny dahalo any an-toerana.
Raha ny fanazavan'ireo havany dia efa-dahy no nosamborina tamin'ny 20 mey 2019 ary nolazaina fa mitazona basy « noho ny endrikendrika ». Tamin’ny alakamisy 30 mey 2019 izay andro faha-10 nitazomana azy ireo dia nakarina tao anaty kamiao izy ireo.
lundi, 03 juin 2019 15:14
Marolambo: Vaky eny an-dalana sy niova eny anelanelan-trano ireo PV fifidianana
Kandida maromaro no milaza fa hivondrona hitaky ny hanafoanana ny latsabato taty amin’ny Distrikan’i Marolambo, Faritra Atsinanana manoloana ireo hosoka, hala-bato ary fanovana ny fitanana an-tsoratry ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey 2019 araka ny ambaran’izy ireo.
Maro ireo porofo eo ampelantanana, hoy izy ireo, miaraka amin’ny fanamarinan'ny CENI sy ireo Sefo Fokontany.
Tany amin’ny lisi-pifidianana dia efa nosivanina ireo mpifidy nampidirina tao amin’ny lisitry ny CENI, ary ireo lisitra naterin'ireo Sefo Fokontany tamin’ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana (RALE) dia tsy nisy nampidirina ihany koa, hoy hatrany ny fanazavana.
lundi, 03 juin 2019 15:12
Marc Ravalomanana: “Tsy resy ny TIM”
“Tsy resy akory ny TIM fa nandresy fa saingy betsaka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny hala-bato misy. Tsy atao mahakivy izany fa tsy maintsy atrehina ary tsy maintsy mijoro hatrany isika manohitra ny tsy mety ary mampahafantatra ny vahoaka izany”, hoy ny filoham-pirenena teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) Marc Ravalomanana, manoloana ny fifidianana solombavambahoaka teo.
Betsaka, hoy izy, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny hala-bato ka very ny fahatokisan’ny vahoaka ireo andrim-panjakana samihafa eto amin’ny firenena. Leo ny fitiavantena, ny fitiavan-tseza sy ny kolikoly ny vahoaka ka izay no mahavery ny hasin’ireo andrim-panjakana eto amintsika.
lundi, 03 juin 2019 13:07
Îles malagasy : Entre communications et attentes
Durant sa visite officielle de 6 jours en France, le président malagasy Andry Rajoelina et celui de la France Emmanuel Macron, se sont convenus le 29 mai de relancer les discussions sur le statut des « îles Eparses », 5 ilots autour de Madagascar (Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India), administrés par la France depuis 1960 mais revendiqués par Madagascar depuis 1973.
lundi, 03 juin 2019 12:47
FIDA – Madagasikara: 40 taona niaraha-niasa
Hankalazaina ny alakamisy 06 jona ho avy izao ao amin’ny Hotely IBIS Ankorondrano ny faha-40 taonan’ ny fiaraha-miasa nisy teo amin’i Madagasikara sy ny FIDA (Fonds International de Développement Agricole).
Tonga eto Madagasikara, ny alin’ny 2 jona 2019, ny Tale Lefitry ny FIDA, Donald Brown. Nitsena teny ampahatongavana Ivato ny Minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, Ranarivelo Lucien.
lundi, 03 juin 2019 12:43
Kidnapping: Sady tsy hita velona no tsy re maty i Owne Alek
Dimy lahy mitam-basy no naka an-keriny an’ity tovolahy karana ity tao Ambohijafy Toamasina tamin’ny 24 jona 2014, teo anatrehan’ny reniny sy ny anabaviny.
Hatramin’izao tsy fantatra ny nanjo an’i Owne Alek na velona na maty, na dia efa nandoa vola notakian’ireo mpaka an-keriny ho tambin’ny famontsorana azy aza ny fianakaviny, ny 28 jona 2014.
Naseho tamin’ny takelaka lehibe teto Toamasina ny sariny mba hanamorana ny fahitana azy, ary nanokana 40 tapitrisa Ariary ihany koa ny fianakaviany ho an’ireo olona afaka manome vaovao hahitana an’i Owne Alek, fa tsy nahitam-bokatra izany hatreto.
Voalaza fa manana aretina mitaiza i Owne Alek. Diabetika izy, ary manaraka fitsaboana tsy tapaka, mitsindrona « insuline » isan’andro.
lundi, 03 juin 2019 12:22
Kitra - Lalao ara-pirahalahiana: Nirava ady sahala Madagasikara sy Luxembourg
3 noho 3, io no isa nisarahan’i Madagasikara sy Luxembourg tamin’ny lalao ara-pirahalahiana natao omaly tao Luxembourg. Lalao tafiditra amin’ny fanomanan-tenan’ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra mialoha ny hiatrehana ny CAN 2019 hatao any Egypta.
Efa nitarika an’isa 3 noho 1 ny Barea Madagasikara, no nosahalain’i Luxembourg tany amin’ny minitra farany ny baolina roa nisesy.
Hiverina ao Lisses (Essonne – Frantsa) indray ny Barea manohy ny famondronana, mialoha ny hiatrehany ny lalao ara-pirahalahiana faharoa hifandonany amin’i Kenya, amin’ny zoma 7 jona izao.
Tsy nisy fampitana mivantana tamin'ny fahitalavitra ny lalao araka ny fampitam-baovao nataon'ny Comité de normalisation.
lundi, 03 juin 2019 12:05
Journée mondiale pour le vélo.